Puntland oo war-saxaafadeed deg deg ah dhinaceeda kasoo saartay dagaalka Gaalkacyo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Puntland oo war-saxaafadeed deg deg ah dhinaceeda kasoo saartay dagaalka Gaalkacyo (AKHRISO)
War-murtiyeed kasoo baxay madaxtooyadda Puntland ayaa looga hadlay dagaalka haatan ka soconaaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaas oo u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland.
Waxaa war-murtiyeedka lagu sheegay in Galmudug ay jabisay heshiiska lagu kala saxiixday magaalada Abuu Dhabi ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta, islamarkaana dagaalka maanta kasoo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ay iyaga soo qaadeen.
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug ay duulaan qaawan kusoo qaadeen dhinaca ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland, xilli ay isku diyaarinayeen hirgelinta heshiiskii lagu kala saxiixday dalka Imaaraatka Carabta.
Dhinaca kale, waxaa war-murtiyeedka lagu sheegay in Punland ay difaacan doonto dhulkeeda, islamarkaana duulaan kasta oo kaga yimaada Galmudug aysan gacanta ka laaban doonin.
Ugu dambeyntii, waxaa shacabka reer Puntland loogu baaqay inay difaacdaan dhulkooda islamarkaana ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah dowladnimadooda iyo jiritaankooda ee lagu soo qaaday koonfurta gobolka Mudug.
Hadaba nuqul ka mid ah war-saxaafadeedka oo nasoo gaaray ayaa u qornaa sida hoos ku xusan: